किन महन्थ र राजेन्द्रलाई मिलाउन चाहन्छ भारत ?
गृहपृष्ठसमाचारअर्थअन्तर्राष्ट्रियखेलकुदमनोरन्जनअन्तरवार्तासमाजफोटो फिचरसम्पर्क	You are here: Homeअन्तर्राष्ट्रियअन्तर्राष्ट्रियकिन महन्थ र राजेन्द्रलाई मिलाउन चाहन्छ भारत ?
Monday, 03 October 2016 19:54	Rate this item
वीरगन्ज १७ असोज महन्थ ठाकुर अध्यक्ष रहेको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र राजेन्द्र महतो अध्यक्ष रहेको सद्भावना पार्टीबीचको एकताको चर्चा एकपटक पुनः शुरु भएको छ ।
एकताका लागि दुवै दलका अध्यक्षबीच पटक–पटक कुराकानी भएको छ भने एकताकै लागि भनेर सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मण लाल कर्ण र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष बृषेशचन्द्र लाल रहने गरी एक कार्यदल पनि गठन गरेको छ । कार्यदलले विभिन्न चरणमा बैठकहरु सम्पन्न गरे पनि हालसम्म एकताबारे ठोस टुगों भने लागेको छैन । हुन त यसअघि पनि यी दुई दलबीच एकीकरण हुने चर्चा नचलेको होइन तर पार्टीभित्रकै आन्तरिक असहमतिका लागि एकीकरण नहुन नसकेको पाटीकै नेताहरु बताउँछन् ।
किन हुँदैछ एकीकरण ?
रोकिएको एकीकरणको प्रयास फेरि शुरु भने त्यतिकै भएको होइन । नेपालमा माइक्रोम्यानेजमेन्ट गरिरहेको भारतले यी दुई दललाई ‘एकीकरण गर’ भनि दबाब दिन थालेको कारण एकीकरणको प्रकृयाले फेरि स्पिड पक्डिएको हो । भारतले तमलोपा र सद्भावना पार्टीलाई मात्र होइन, मधेशमा रहेका सबै दललाई एकआपसमा एकीकरण गर्न दबाब दिइरहेको छ ।
यसअघि उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, तमलोपा र सद्भावना पार्टीबीच एकीकरण गराउन पनि भारतले मध्यस्थता गरेको थियो । त्यसबेला सबै कुरा मिलिसकेको पनि थियो । तर, पार्टीको अध्यक्ष को हुने भन्ने विषयमा कुरा नमिलेपछि तीन दलको बीचमा एकता तुहिएको थियो ।
त्यसबेला एकीकृत पार्टीको अध्यक्षमा उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरको दाबी थियो । राजेन्द्र महतोले अध्यक्षमा आफ्नो दावी नरहेको बताएका पनि भित्रभित्रै महन्थ ठाकुर अध्यक्ष बन्नुपर्ने पक्षमा थिए । यादव अध्यक्ष बन्न नपाएपछि एकता प्रकृया भाँडिएको थियो ।
एकीकरणको रेसबाट यादव बाहिरिए पनि त्यसपछि राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरबीच एकीकरणको कुरा चलेको थियो । भारतले उपेन्द्र यादवलाई छाडेर भएपनि एकीकरणका लागि दवाव दिएको थियो । त्यसबेला भारतीय दूतावासका फस्र्ट सक्रेटरी पियुष श्रीवास्तावको उपस्थितिमा यी दुई दलको पटक पटक वार्ता भएको थियो । महन्थ ठाकुरलाई पार्टीको अध्यक्ष तथा राजेन्द्र महतोलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने लगभग सबै कुरा फाइनल भइसकेको थियो तर अन्त्यमा फेरि कुरा मिलेन ।
तमलोपा पार्टी स्रोतका अनुसार पार्टी एकीकरण यसरी हुँदैछ भन्ने कुराको जानकारी पाएपछि सो पार्टीका उपाध्यक्ष हृदयश त्रिपाठीले अध्यक्ष ठाकुरलाई भेटेका थिए । भेटमा उनले भनेका थिए, ‘सुन्दैछु पार्टी एकीकरण हुँदैछ, हुन लागेको एकीकृत पार्टीमा मेरो स्थान कहाँ ?’ त्रिपाठी राजेन्द्र महतोको तल बस्न चाहँदैनन् थिए । आफ्नो स्थानबारे उचित आश्वासन नपाएपछि त्रिपाठीकै कारण एकीकरण प्रकृया स्थगित भएको थियो । त्यसपछि त्यसको चर्चासम्म पनि भएन ।
तेस्रो मधेश आन्दोलन पछि भने स्थगित रहेको एकीकरणका कुरा पुनः शुरु भएको छ ।
एकीकरण हुनुका चार कारण
पहिलो कारणः मधेशमा प्रमुख तीन दल काँग्रेस, एमाले र माओवादीलाई टक्कर दिन
दोस्रो कारणः उपेन्द्र यादवको पार्टीलाई कमजोर गर्न
तेस्रो कारणः राज्यमा बलियो उपस्थिति देखाउन
चौथो कारणः मधेशी जनताको चाहना पूरा गर्न
उपेन्द्र यादवले अशोक राईको पार्टीसँग एकीकरण गरेपछि मधेशमा मात्र होइन देशमै राम्रो संगठन निर्माण गर्दैछन् । जानकारहरु भन्छन्, ‘उपेन्द्र यादव भारतको विश्वास पात्र होइनन् । विश्वास पात्र भनेको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो नै हुन् । त्यसमा पनि भारतले राजेन्द्र महतो भन्दा बढी महन्थ ठाकुरलाई विश्वास गर्छ ।’
२०६३ सालमा मधेश आन्दोलनबाट एकाएक उदाएर स्थापित भएका उपेन्द्र यादवको पार्टीलाई काउन्टर दिनका लागि भारतले महन्थ ठाकुरलाई पार्टी खोल्न लगाएको कुरा यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको विषय हो ।
र, अहिले पनि उपेन्द्र यादवको बढ्दो संगठनलाई कमजोर गर्न राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरबीच एकीकरण हुन लागेको चर्चा राजनीतिक वृतमा रहेको छ ।
कहाँ पुगियो एकीकरण प्रकृया ?
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले कुराकानी मात्र शुरु भएको र कुनै टुंगोमा नपुगेको बताए । उनले दुई दलबीचमा मात्र नभएर, मधेशमा रहेका अन्य दलहरुको बीचमा पनि एकीकरण होस् भनि आफूले चाहेको प्रतिकृया दिए । ‘मधेशी जनताको एउटै माग हो सबै मधेशवादी दलहरु एक होउन् । तर दलहरुको बीचमा कुरा नमिलेको कारण एकीकरण हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
‘एकीकरण गर्ने कुरा लगभग पक्का भएको छ । प्राविधिक कुराहरु मिलाउन मात्र बाँकी छ,’ तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका महासचिव जंगीलाल राय यादवले भने, ‘दुई दलको बीचमा एकीकरणको विषयमा घनिभूत छलफल भइरहेको केही दिनमै यसको परिणाम आउने छ ।’
तर सोही पार्टीका उपाध्यक्ष बृषेशचन्द्र लालले चर्चामा आएको जस्तो एकीकरणको प्रकृया शुरु नभएको प्रतिकृया दिए ।
दुई दलको बीचमा कुराकानी भएको छ तर यही र यो विषयमा कुरा भएको हो भन्ने खालको कुरा केही नभएको बताउँदै उनले एकीकरण दुई दलमा मात्र होइन, अन्य दलहरुको बीचमा हुनुपर्ने पक्षमा रहेको प्रतिकृया दिए ।
एकीरणका लागि आ–आफ्नो दावी
यसपटकको एकीकरणमा तमलोपाका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी फेरि बाधक नबनुन्् भन्ने किसिमले एकीकरणको कार्य अगाडि बढेको स्रोतहरुको दाबी छ । तर, त्रिपाठी बाधक भए उनलाई छाडेर भएपनि यसपटक एकीकरण हुने तयारी भइरहेको पार्टीका नेताहरु नै बताउँछन् । त्रिपाठी र राजेन्द्र महतोलाई बाराबरको हैसियत दिएर पनि पार्टी एकीकरण गर्ने पनि तयारी रहेको बुझिएको छ ।
श्रोतबाट http://www.ratopati.com/news/83702/	Read 558 times	Last modified on Tuesday, 04 October 2016 21:50	Tweet
« विजयादशमीको वीरगन्जमा पनि चहलपहल सुरु - फोटो फिचर सहित	संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा आन्दोलनमा जाने चेतावनी »